स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ? - Karobar National Economic Daily
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
query_builderMay 5, 2017 7:00 PM supervisor_accountकारोबार visibility730
काठमाडौंं: निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । उमेद्ववारले आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने बताइएको छ ।
आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ सिमामा महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुले तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
यस्तै नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यले दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । निर्वाचनमा गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भने तीन्लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार रुपयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न पाईने छैन ।
उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभित्रको रकम मतदाता नामावली खरिद गर्न, सवारी साधन र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन, प्रचारप्रचार सामाग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, विविध प्रकारका प्रचार प्रसार, कार्यालय सञ्चालन लगायतका काम सम्पन्न गर्नु पर्ने छ ।
खर्चको विवरण सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नुपर्ने समेत आयोगले जनाएको छ । विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । निर्धारित समयमा आयोगमा उक्त विवरण नबुझाएमा प्रचलित कानुन अनुसार जरिवाना गर्न सक्ने जनाएको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार